बुधबारदेखि मेसिन लर्निङ तथा डेटा साइन्समा राष्ट्रिय वर्कशप हुँदै, यसरी हुनुहोस् सहभागी
आगामी बुधबारदेखि मेसिन लर्निङ र डेटा साइन्समा चौंथो राष्ट्रिय वर्कशप आयोजना हुने भएको छ । मेसिन लर्निङ एण्ड डेटा साइन्स नेटवर्क र माउन्टटेक सोलुसन प्रालिको सहकार्यमा मेसिन लर्निङ र डेटा साइन्स सम्बन्धि भर्चुअल वर्कशप आयोजना हुने भएको हो ।
भदौ ३० गतेदेखि असोज ३ गतेसम्म वर्कशप आयोजना हुने आयोजकले जानकारी दिएको छ । मेसिन लर्निङ र डेटा साइन्स सम्बन्धि राष्ट्रिय वर्कशप सन् २०१८ बाट शुरू भएको थियो ।
चौथो संस्करणमा पनि ८०० भन्दा बढी सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ । देश तथा विदेशका विशेषज्ञहरूले वर्कशपमा तालिम दिनेछन् ।
कार्यक्रमको कीनोट स्पीकरको रूपमा अमेरिकाको हावर्ड विश्वविद्यालयका प्रा.डा. डण्ड रावत, काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ इन्जिनियरिङका डीन प्रा.डा. मनिष पोखरेल, फ्युजमेसिन्सका संस्थापक डा. समिर मास्के र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका डीन डा. शशीधर राम जोशीको उपस्थिति रहने छ ।
त्यस्तै गेष्ट स्पीकरको रूपमा सीक्यु विश्वविद्यालयका पोष्ट डक्टरल रिसर्च फेलो डा. आनन्द कोइराला, जेनेस सोलुसनका ग्लोबल सीटीओ अञ्जनी फुँयाल, एप्पलकी सिनियर सर्च रिलिभेन्स डा. अर्चना भट्टराई, ट्रिलिफ टेक्नोलोजिज प्रालिका सह-संस्थापक अशोक कुमार पन्त, काठमाडौं विश्वविद्यालयको कम्प्युटर साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख डा. बाल कृष्ण बलको उपस्थिति रहने छ ।
त्यस्तै डा. दोभान राई, डा. झनक पराजुली, इ. ज्ञानेश्वर बोहरा, डा. मनिष थापा, डा. मनोज कार्की, डा. विशेष खनाल, विशाल लामिछाने, डा. भोगेन्द्र मिश्र लगायतको सहभागीता रहने छ ।
यस वर्कशपमा मेसिन लर्निङ, डेटा साइन्स, ट्रान्सफर लर्निङ, क्वान्टम एआई, फोरकाष्टिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ लगायतका विषयको बारेमा जानकारी पाइने छ । साथै अन्त्यमा प्रोजेक्ट वर्क समेत हुनेछ ।
यो कार्यक्रमको शुल्क ५०० रूपैयाँ राखिएको छ । शुल्क बैंक खाता वा इसेवामा पठाउन सकिने छ । कार्यक्रम हरेक दिन बिहान ७ बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्म संचालन हुनेछ । यसमा सहभागी हुनेले प्रमाणपत्र पनि प्राप्त गर्नेछन् ।
यस वर्कशपमा सहभागी हुन् यहाँ क्लिक गरी रजिष्टर गर्नुहोस् । कार्यक्रम सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी पाउन यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यस वर्कशपमा शैक्षिक सहयोगीको रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ र नेपाल खुला विश्वविद्यालय, सीएसआईटी एशोसिएसन अफ नेपाल, नामी रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रायोजकको रूपमा फ्युजमेसिन्स नेपाल, ट्रिलिफ, पास्कल कलेज, एक्सटेन्सो डेटा, आदिम कलेज रहेका छन् । त्यस्तै पोर्टनरको जेनेस सोलुसन र दियो डटएआई रहेका छन् भने मिडिया पार्टनरमा आइसिटी समाचार रहेको छ ।